Mobile app kuvandudza inzira yekuvaka nharembozha dzinomhanya pane nharembozha. Aya maapplication anogona kunge akafanogadzwa-kuiswa kana kurodha pasi uye kuiswa nemushandisi gare gare. Ivo vanoshandisa iyo network kugona kweye mudziyo kushandira komputa zviwanikwa zviri kure. Nekudaro, iyo nharembozha yekuvandudza maitiro inoda kugadzira software inogona kuiswa pane chishandiso, uye ichigonesa backend masevhisi ekuwana dhata kuburikidza nemaAPI, uye kuyedza iko kunyorera pane tarisiro zvishandiso. zvido zvehardware, uye zvimwe zvakawanda zvezvinhu zvekuvandudza kweapp.